श्रमिकहरुको आवाज बुलन्द पार्न मेरो उम्मेदवारी | My News Nepal
ट्रेड यूनियन कांग्रेसको महाधिवेशन राजधानीमा जारी छ । मंगलबारबाट शुरु छैटौ महाधिवेशनले ४१ जनाको केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गर्दैछ । समितिमा ८ जना खुल्ला सदस्य पद रहेकोमा मुकुककै विकट क्षेत्र मानिएको कर्णाली प्रदेशबाट राजेशकुमार बुढाले उम्मेदवारी दिनु भएको छ । २०६४ सालमा ट्रेड यूनियन कांग्रेसको प्रतिनिधि हुनु भएका बुढासँग २०४५ सालबाट भूमीगत रुपमा शिक्षक संघसँग आवद्ध भई २०५३ सालबाट भने नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघको साधरण सदस्य भएर काम गरेको अनुभव छ । २०५६ सालमा नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ सुर्खेत जिल्लाको अध्यक्ष हुनु भएका बुढाले भर्खरै सम्पन्न सातौ जिल्ला अधिवेशनबाट भने नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु भएको थियो । लामो समय स्वास्थकर्मीहरुको माझम रहेर काम गर्नुभएका बुढा हाल नेपाल निजामती कर्मचारी संघ सुर्खेतको जिल्ला अध्यक्षको रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ । उहाँ अहिले ट्रेड यूनियन कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य पदका लागि मैदानमा उत्रनु भएको छ । महाधिवेशस्थलमा भेटिनु भएका बुढासँग ट्रेड यूनियन कांग्रेसको चुनावी माहौलको बारेमा माइन्यूज नेपालका लागि कुमार भण्डारीले गरेको कुराकानी :
० ट्रेड यूनियन कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्यका पदमा तपाईको उम्मेदवारी किन ?
– स्वास्थकर्मी साथीहरुको सुख दुःखमा साथ दिन र ट्रेड यूनियन कांग्रेसमा स्वाथ्यकर्मी संघको ढोका खोल्नका लागि मैले कर्णाली प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्दै उम्मेदवारी दिएको हुँ ।
० चुनावी माहौल कस्तो बनाउनु भएको छ त ?
– अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा चुनावी माहौल एकदमै राम्रो देखेको छु । लामो समय देखि यसै क्षेत्रमा रहेर साथी भाईको दुःख सुखमा साथ दिइरहेको हुनाले सबैको सहयोगको अपेक्षा गरेको छु । ट्रेड यूनियनमा स्वास्थ्यकर्मी संघको मात्रै ६० भन्दा बढि भोट रहेको हुँदा उहाँहरुको साथ र समर्थन पाउनेमा ढुक्क छु । अहिले पनि साथीहरुको आग्रह र सल्लाहमा नै उम्मेदवारी दिएको हुनाले उहाँहरुले मलाई साथ दिनुहुने नै छ ।
० तपाईंका एजेण्डाहरु के–के हुन् ?
– ट्रेड यूनियन कांग्रेस भनेको विशाल संगठन हो । सडकमा काम गर्ने मजदुरदेखि करोडपतिसम्म यहाँ आवद्ध हुनुहुन्छ । यहाँ धेरै पेशासँग आवद्ध साथीहरु रहनु भएकाले श्रमिकहरुको हकहित, सुरक्षा र सम्वद्र्धनका लागि पहल गर्ने नै मेरो पहिलो एजेण्डा हो । श्रमिकहरुमाथि देखिदै आएका हेपाहा प्रवृत्तिको अन्त्य र श्रमिकहरुलाई राज्यले हेर्ने दृष्णिकोणमा परिवर्तन गराउन पनि मेरो पहल रहन्छ ।
एक गाँस खान र एक सरो लगाउन पनि समस्या पर्ने श्रमिकहरुको हक अधिकारका लागि मैले आवाज उठाउँदै आएको छु । एउटै काम गर्ने श्रमिहरुमाथि थिचोमिचो हुँदै आए र उचित पारिश्रमिक नदिइएको विषयलाई पनि मैले एजेण्डामा समेटेको छु । अर्को कुरा ट्रेड यूनियन कांग्रेससँग आवद्ध विभिन्न पेशागत संघ संगठनको आवज सडक देखि सदनसम्म पु¥याउन पनि मेरो प्रयास हुनेछ ।
० तर, नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमाथि नै श्रमिकहरुलाई माथि जान नदिएको भन्ने आरोप लागेको छ नि त ?
– स्वर्गिय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जुन बेला जुट मिलका श्रमिकहरुको नेतृत्व लिएर आन्दोलन शुरु गर्नु भएको थियो, त्यतिबेला देखि नै नेपाली कांग्रेसले श्रमिकहरुको हक अधिकारका लागि आवाज उठाउँदै आएको छ । अन्य राजनीतिक दलहरुले कांग्रेसभित्र भाँडभैलो मच्चाउनका लागि जे जस्ता अफवाह फैलाए पनि त्यसले कांग्रेसलाई कुनै असर गर्दैन । रिक्सा चलाउने मजदुर देखि चिया वगानमा काम गर्ने, व्यूटिपार्लरमा काम गर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रका श्रमिकहरको आवाज बुलन्दा पार्ने पार्टी भनेकै नेपाली कांग्रेस हो । ट्रेड यूनियन कांग्रेसमा आवद्ध हुनुभएका नेताहरु संसद पनि बन्नु भएको छ । नेतृत्वले माथि जान नदिएको भन्ने आरोप सरासर गलत हो । श्रम गरेकै भरमा माननिय बनाउन त सम्भव पनि छैन नि त होइन ?
० अन्त्यमा, मतदाताहरुलाई के भन्नुहुन्छ ?
– एकदमै विकट र राज्यले उपेक्षा गरेको क्षेत्रको कर्णाली प्रदेशबाट मैले उम्मेदवारी दिएको छु । कर्णालीबाट मेरो बाहेक टे«ड यूनियन कांग्रेसमा कसैको पनि उम्मेदवारी छैन । पूर्व मेची देखि पश्चिम महाकालीसम्मका सबै सदस्यहरुलाई कर्णाली प्रदेशको आवाज ट्रेड यूनियन कांग्रेसमा बुलन्द बनाउनका लागि, त्यहाँका समस्याहरु केन्द्रसम्म पु¥याउन र समस्याको समाधानका लागि पहल गर्ने वातावरण बनाउन मलाई भोट दिएर अत्याधिक बहुमतले जिताइदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु ।